फोटो फिचर – Page4– shubhabihani
Home / फोटो फिचर (page 4)
अवतरणका क्रममा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना, सबै यात्रु सकुशल …. ( फोटो फिचर )
८ असोज, भैरहवा । यती एयरलाइन्सको विमान भैरहवा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भएको छ । तर, सबै यात्रु सकुशल छन् ।
अवतरणका क्रममा विमान रनवेबाट घासे मैदानमा पुगेको थियो । यती एयरलाइन्स, भैहरवा एयरपोर्टले विमान सामान्य दुर्घटनामा परेको र सबै यात्रु सुरक्षित रहेको बताएको छ ।
केही यात्रुलाई समान्य चोट लागेको र उनीहरुलाई युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ साइन्स लगिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेले विमान दुर्घटनामा परेको खबर आएको पुष्टि गरे ।
तस्विर : हेमन्त सागर केसी को फेसबुक वाल बाट
दाइजो नपाएको झोंकमा श्रीमानले काटे श्रीमतीको नाक ( फोटो फिचर )
कहिँ नभएको अचम्म चिज हरु हुने भारत मा फेरी एउटा एस्तो दर्दनाक घटना भएको छ जहाँ संगै जिउने संगै मर्ने कसम खाएर अग्नि को सात फेरा लगाएर गरेका बाचा दाइजो को नाम मा श्रीमान ले एती सम्म घृणित काम गरेका छन उन ले आफुले भने अनुसार दाइजो नपाएको र दाइजो नदिय जे पनि गर्छु भन्ने आफ्नै श्रीमान ले श्रीमती को नाक काटी दिएका छन्
उत्तर भारतस्थित उत्तर प्रदेशको सज्जनपुरकी कमलेश राथोर, २५, लाई उनका श्रीमान् संजीव राथोर, २७, ले दाइजो स्वरुप ८० हजार नदिएको रिसमा उनको नाक काटिएको हो ।
कमलेश भन्छिन्, ‘दाइजोका लागि उनले मलाई दैनिक सताउने गर्दथे । उनले तारन्तार मसँग ८० हजार रुपैयाँ दाइजो मागिरहन्थे ।’
‘मैले निरन्तर भन्थें कि मेरो बुवा निकै गरिब हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँले तपाईंलाई यति रकम दिन सक्नुहुन्न । उनले मेरा केही कुरा सुनेनन् । मेरो नाक काटिदिने भनी सधैं धम्की दिन्थे,’ उनी भन्छिन् । ‘यहि निउँमा उनले मलाई वर्षौंदेखि कुट्दै आएका छन् ।’
‘उनले मलाई बेल्ट, जुत्ता, लट्ठीले कुट्दथे । मलाई यौनकर्मीको रुपमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै मलाई बेचिदिने धम्की पनि दिन्थे । दिनदिनै रक्सी खाएर आउने मेरो श्रीमानसँगको ८ वर्ष बसाईं मेरो लागि निकै कष्टकर रह्यो, ’ उनले डेली मेललाई बताइन् ।
गत सेप्टेम्बर १४ तारिखमा कमलेस खाना बनाइरहेकी थिइन् जब संजीवले पुनः ८० हजारको माग राखी उनीमाथि कराए । उनका अनुसार त्यस दिन घरका अन्य परिवारले उनलाई पछाडिबाट समाते र भुइँमा लडाए, त्यतिबेला उनको श्रीमान् उनको नाक काटिदिए । उनले भनिन्, ‘मलाई उनीहरुले निकै बेस्सरी च्यापेका थिए, म चलमल गर्ने अवस्थामा थिइनँ ।’
६ वर्षीया छोरीकी आमा कमलेसको नाक काटेपछि उनको श्रीमानसहित परिवारका अन्य सदस्य सम्पर्कबिहिन छन् । नाक काटिसकेपछि श्रीमानको अन्तिम वाक्य थियो, ‘अब तँ जिन्दगीभर यस्तै हुन्छेस् ।’
घटनापश्चात् कमलेशले उनको घर नजिकै रहेको आफ्नो माइतीपक्षलाई बोलाइन्, उनीहरुले कमलेशलाई नजिकैको अस्पताल पुर्याए । डाक्टरहरुले उनको नाकलाई पुनः जोड्न सकेनन् किनभने नाकको टुक्रालाई संजीवले आफूसँगै लिएर गएका थिए । नाकको शल्यक्रिया गर्न कमलेशको माइतीपक्षको आर्थिक स्थिती निकै कमजोर रहेको उनले बताइन् ।
पुलिसका अनुसार उनीहरुले घटनामा संलग्न कमलेशका श्रीमान्, सासू, ससूरा, नन्द र देवरको खोजी गरिरहेका छन् ।
को–को गए संविधान दिवसको विशेष कार्यक्रममा टुडिखेल (फोटोफिचर)
नेपालको संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा प्रथम वार्षिकोत्सव मनाइएको छ । नेपाली सैनिक मञ्च टुडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रिगण, सांसदहरु विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सहभागी थिए ।
सो अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । तस्बिरः चन्द्रबहादुर आले काठमाण्डु टुडे
काठ्माण्डौ टुडे बाट साभार
फेसबुकबाट युवकहरुलाई रुपजालमा फसाएर विवाहको नाटक गर्दै पैसा कुम्ल्याउने सुन्दरी जेल परिन ( फोटो फिचर )
सक्कली नाम विधा सरकार तर कहिले ईन्दिरा, कहिले रुचि अनि कहिले दिलासा जस्ता विभिन्न छद्म नाम भएको महिलाको नाम हो विधा सरकार अर्थात रुचि, दिलासा, फेमिना चापागाई । चापागाई थर बिवाह पछी राखेकी यी महिलाको ठगि धन्धाको बारेमा सायद धेरै नेपालीहरुलाई थाहा नहुन सक्छ ।
नेपालको सुदुर पुर्व ईटहरी माईत भएकी बंगालीमुलकी यि महिलाले विवाह समेत पटकपटक गरि सकिन ।
यिनको बिवाह धन्धा भनेको सोझासिधा नेपालीहरुलाई आफ्नो रुपजालमा फसाएर सोझा सिधा नेपालीहरु लुट्नु मात्र रहेछ भन्ने कुरा आज आएर प्रमाणित भएको छ र यहि पापको घडा भरिएर यी ठग महिला अहिले प्रहरीको चिसो कोठरीमा पुग्न समेत बाध्य भएकी छिन ।
सामाजिक संजाल फेसबुक कसैको लागी बरदान साबित भएको छ भने कसैको लागी अभिसाप ।
फेसबुक मार्फत सोझा सिधा युवकहरुलाई आफ्नो रुपजालमा फसाएर विवाहको नाटक रच्दै रकम कुम्ल्याउन माहिर रैछन भन्ने कुरा आज प्रहरीको फन्दामा परे पछी मात्र धेरैले चाल पाए । केहि समय मलेसियाको बसाई पछी यी ठग महिलाले म अहिले जर्मनीमा छु । म संग रातो पासपोर्ट छ !
युरोप पठाई दिन्छु भन्दै सोझा सिधा नेपालीहरुलाई आफ्नो मोहिनी रुपजालमा फसाउन सफल भईन । त्यसरी फस्नेमा पुर्व तिर घर भएका थपलिया थरिका ब्यक्ति परे ।
विवाहको नाटक देखाएर यी ठग महिलाले आफ्ना पति जेठाजु देखि देउरानी समेतलाई आफ्नो वाकपटुताले लठ्याएर करोडौ करोड रकम ठग्न सफल भएकी रैछिन । ती आईमाई एक्लैले यस्तो काम गर्न पक्कै पनि सक्दैन । आफ्नो मोहनिजालमा युवाहरुलाई फसाउदै लाखौ रकम लिएर टाप कस्नमा मद्धत गर्ने माईतिकै सदस्यहरु आमा ईन्दिरा तथा सानीआमा यमुना रैछ भन्ने कुरा पनि पछी खुल्न आएको देखियो ।
कुनै पनि व्यक्तिको घरमा अपरिचित पुरुष आएर घरकी बुहारीलाई तर्साउछन भने घरको मुलिले पक्कै पनि सहन सक्दैन । फेसबुक चिनाजानी मार्फत पाचौ पटक बिवाह गरेर आएकी यी धुर्त आईमाईले धेरै युवाहरुको भबिस्य बर्बाद बनाई दिएको रैछ भन्ने कुरा पति देखि घर मुलिले पत्तो पाउने कुरा पनि भएन । युरोप पठाई दिन्छु भनेर रकम लिईन तर नपठाए पछी पिडित मध्येका एकलाई रकम फिर्ता त गरिन सिद्धार्थ बैंक ईटहरीको नाउँमा काटिएको त्यो चेक सक्कली नभएर नक्कली रहेछ भन्ने कुरा समेत प्रमाणित भएको देखियो । जुन दिन बाट हालको बिवाह गरेको लोग्नेको घरमा बिहा गरेर प्रबेस गरिन त्यस पछी घरमा अपरिचित मानिसहरु आएर यो आइमाइले हामीलाई युरोप पठाई दिन्छु भनि लाखौ ठगेको छ भन्दै पैसा माग्नेको तातीं देख्दा घर मुली देखि पति सम्म छक्क पर्नु स्वभाविकै थियो । हुँदाहुँदा एक दिन प्रहरिनै आएर पक्राउ गरि लगेपछी पाँचौ पटकका पति देखि पतिका घरका सम्पूर्ण सदस्यहरु समाजमा बेईज्जति हुने भयेले चिन्तामा पर्नु स्वभाविकै थियो ।
राजनेताहरुलाई आफ्नो मोहनी सुन्दरता देखि चिप्लो कुराले प्रभाव पार्न खप्पिस यी महिला समय समयमा सामाजिक कार्यमा संलग्न भएको देखाउन समेत खप्पिस थिइन । समाज सेवा भन्दै वालवालिकालाई सहयोग गरेको तस्बिर सामाजिक संजाल फेसबुकमा राख्ने यी महिला ठुला पार्टीका नेताहरुको नजिक पुग्न समेत सफल भएकी थिइन । केहि तस्बिरले त्यस्तै देखायो । पार्टीका नेताहरु संग तस्बिर खिचाएर आफ्नी ठगि धन्दा चलाउन फेमिना चापागाई माहिर रैछीन । अनुहार तथा सौन्दर्यको भरपुर फाईदा उठाएर थुप्रैलाई आफ्नो बसमा पारेर युरोप पठाई दिन्छु भनि करोडौ करोड ठग्न सफल फेमिना चापागाई हाल प्रहरी हिरासतमा छिन । पापको घडा भरिन्छ भनेको यहि नै हो क्यार ।
हाम्रो गाउँ समाजमा बस्ने नागरिकहरु आफ्नो छोरी चेली बुहारीले गल्ति गर्यो भने समाजमा बेईज्जत हुन्छ भन्ने भयले साँचो कुरा बाहिर ल्याउन चाहादैनन । प्रहरी आएर पक्राउ गरि नलगेको भए विधा सरकार अर्थात फेमिना चापागाईले अन्य धेरैलाई आफ्नो मोहनीजालमा फसाएर घरको न घाटको बनाउने पक्का थियो । पिडितहरुले उजुरी गरेको भएर पक्राउ परि अहिले जेलको चिसो हावा खादैछिन तर पनि जेलबाट छुटेर आएपछि हालको पतिलाई तलाई ठिक पार्छु , मेरो शक्ति देखाई दिन्छु भनेर धम्क्याउन छाडेकी छैन । हामीले महिला हिंसाको बारेमा त सुनेका थियौ तर महिलाबाट पुरुषहरु लुटिने र ठगिने गरिन्छ भने यस्तो कार्यलाई पुरुष हिंसा भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्तो प्रश्न उठ्न पनि सक्छ होला । हिजो आफ्नो सुन्दरताको कारणले माता सीतालाई राबणले हरण गरेको त सुनेका थियौ । आज आफ्नो सुन्दरताले पुरुष हरण गरेर लाखौ लाख लुटेको पनि देख्न पाईन्छ भने कम्युनिस्ट नेताहरुले भन्ने गरेको महान क्रान्तिकारी तथा अग्रगामी छलांग भनेको यहि त हैन भनेर सोच्न कर लाग्छ कि लाग्दैन ?
कुनै पनि महिलाको सुन्दरतामा मक्ख परेर सामाजिक संजालमा कुरा गरेको भरमा आनीबानी नबुझिकन बिवाह गर्नु भयो भने त्यसले बिपत्ति निम्त्याउन बेर लाउदैन । नेपालमा हत्यारा देखि ज्यानमारा समेत धनदेखि शक्तिको आडमा सजिलै संग हिरासत मुक्त हुने गरेका देखेका छौ । पिडितहरुले न्याय पाउलान नपाउलान त्यो न्यायमुर्तिको हातमा छ तर भोलि जेलबाट छुटे पछी पुन आफ्नो रुप रंग र यौवनको लोभ देखाएर यी महिलाको जालमा कोहि पनि नपरुन । जुन जुन पात्रहरुले आफ्नो जीवनभरको कमाई लुटाए भबिस्यमा पुन: त्यस्तो नहोस भनेर समाजको हितको लागी यो लेख पस्केका छौ । केहि तस्बिरहरु हामीले पिडितले पठाएका छन भने केहि तस्बिर विधा सरकार अर्थात फेसबुक नाम विधा चापागाईको फेसबुकबाट साभार गरेका छौ ।
(पिडित व्यक्तिको सामाजिक ईज्जत तथा प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखेर हामीले नाम ठेगाना प्रकाशित गरेका छैनौ )
प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी पत्नीले अमर्यादित व्यवहार देखाएको भन्दै सीताको तस्विर भाइरल, सामाजिक संजालमा सिता बनिन् भाइरल ( फोटो फिचर )
काठमाडौं, ३१ भदौ । भारत भ्रमणमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय समकक्षी मोदीले हैदरावाद हाउसमा केही मिनेट अगाडि स्वागत गरेका छन्।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले दुई प्रधानमन्त्रीवीचको भेटले सम्बन्धमा नयाँ उर्जा दिएको बताएका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीवीच सुरुमा एक्ला एक्लै वार्ता हुनेछ र त्यसपछि मात्रै दुईपक्षीय अौपचारीक वार्ता सुरु हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा प्रचण्ड पत्नी सीता पौडेल पनि सहभागी छिन् । भारत पुगेकै दिन बिहीबारबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक भेटवार्ता सुरु गरे । बिहीबार र शुक्रबार भएका राजनीतिक तथा उच्चस्तरीय भेटवार्ताका क्रममा प्रचण्ड पत्नी सीता पनि सँगै देखिन्छिन् ।
तर, पति प्रचण्ड भेटवार्तामा रहँदा पत्नी सीताको उपस्थिति अमर्यादित रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमा चर्काे आलोचना भइरहेको छ । आलोचना सहित पोष्ट गरिएका ती तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका हुन् । तस्विरहरु हर्दा लाग्छ साच्चै प्रचण्ड पत्नी सीताले यो के गरेकी हुन् भन्ने सबैको मनमा अवस्य प्रस्न उठाएको छ |
अचानक जिबन थापा मगर कसैलाई थाहा नै नदिई मामासंग यसरी फिलिपिन्स उड्यो ( फोटो फिचर )
भाद्र ३०, काठमाडौं । अचानक जिबन थापा मगर कसैलाई थाहा नै नदिई मामा कामे मगर संग यसरी फिलिपिन्स उड्यो, फोटो फिचर
यी हुन्, विश्वका सबैभन्दा महंगा मोटरसाइकल, हेरेर हुनुहुनेछ चकित… ( फोटो फिचर )
अहिले मोटरसाइकल फेसन नै बनेको छ । यसको शोख राख्नेहरु मूल्य हेर्दैछनन् । धेरै मानिसहरु यस्ता पनि हुन्छन् जसले धेरै महंगा मोटरसाइकल किन्न सक्दैनन् । तर, सस्तै भएपनि किनेर त्यसलाई मोडिफाई गरेर आफ्नो शोख पुरा गर्छन् । आज हामी तपाईंलाई यस्ता मोटरसाइकल देखाउन गइरहेका छौँ जुन विश्वका सबैभन्दा महंगा छन् । यी मोटरसाइकल देखेपछि पक्कै पनि तपाईं चकित हुनुहुनेछ ।
१. TRON Light Cycle – 77,000 डलर
२. Confederate B120 Wraith – 92,500 डलर
३. Vyrus 987 C3 4V – 1,03,800 डलर
४. MV Agusta F4CC – 1,20,000 डलर
५. NCR MH TT (Mike Hailwood) – 1,30,000 डलर
६. The Yamaha BMS –3मिलियन डलर
७. Neiman Marcus Limited Edition Fighter – 11 मिलियन डलर
उपत्यकामा इन्द्रजात्राको उल्लास (फोटो फिचर)
भाद्र ३०, २०७३- इन्द्रोत्सवको अवसरमा राजधानीमा जीवित देवीदेवताका रुपमा कुमारी, गणेश र भैरवलाई बिहिबार हर्ष र उल्लासका साथ रथ यात्रा गरि इन्द्रजात्रा मनाइएको छ ।
रथ यात्राका लागि शाक्य जातकी एक महिला, गणेश र भैरवको भेषमा दुई पुरुषलाई वसन्तपुर दरवारस्थित कुमारी घर अगाडी राखिएको बेग्ला बेग्लै रथमा रथारोहण गरिएको थियो ।
यसै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जीवित देवी देवताको दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गरेकी छिन् । तीनै वटा रथलाई वसन्तपुरबाट तानेर मरू, चिकमुगल, मजिपात, जैशीदेवल, ज्याबहाल, लगन, बह्मटोल, ह्युमत, क्व:हिटी, भीमसेनस्थान भई पुन: वसन्तपुरमा नै पुर्‍याइएका थिए ।
रथ यात्रामा सांस्कृतिक बाजागाजा, पञ्चेबाजा, गुरूजु पल्टन, सैनिक बैण्डबाजा, पञ्चबुद्ध (बैरोचन, अक्षोभ्य, अमोघसिद्धि, अमिताभ र रत्नसम्भव) को भेषमा ग: (घण्टी) बजाउँदै नगर परिक्रमा गरेका थिए ।
राजप्रतिनिघिको रुपमा मल्लकालिन राजखड्ग कुमारीको रथमा राखिएको थियो । साथमा हलचोकको आकाश भैरव, मजिपा: लाखे, किलाघ:का पुलुकिसी नाच (कात्रोले बनाइएको ऐरावत हात्ती) लाई पनि नगरपरिक्रममा गराइएको थियो ।
रथ जात्रामा बाटोमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले बर्षभरिमा दिवंगत भएका आफन्तहरुको नाममा स्तोत्र पाठ र दियो दान गर्दै नगरपरिक्रमा पनि गरेका थिए । यात्रामा पर्ने टोल टोलमा सिगारेर राखेको समेबजी रथ पुग्नासाथ देवीदेवतालाई चढाइएका थिए ।
जात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको घुइचो लागेको देख्न सकिन्थ्यो । रथ जात्रा सकिएपछि धिमेबजाको तालमा धुन्या (रंगीचंगी कपडाका टुक्राहरुले सिंगारेको अग्लो बास) घुमाउदै इन्द्रको आमा भनिने डागीलाई नगरपरिक्रममा गराइएको थियो । उनका साथमा मृतकहरु स्वर्ग गएको हेर्न जाने भनी मृतकको आफन्त पनि बाटोभरि सतबजि छर्दै नगर परिक्रमा गरेका थिए ।
हनुमान ढोका दरवार परिसरमा ध्वजापताका सहितको लिंगो ठड्याएपछि मंगलबार सुरू भएको जात्रा शुक्रबार थने: या: भनी बसन्तपुरदेखि तीनै वटा रथलाई माथिल्लो तोलमा परिक्रमा गराइने छ ।
तस्बिरहरु : हेमन्त श्रेष्ठ/अंगद ढकाल/प्रताप थापा
चिनियाँ सडकमा युवतीले एक युवकलाई कुकुर बनाएपछि…
काठमाडौं । चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल विबोमा एक अनौठो तस्वीर पोष्ट भएको छ, जसले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । चिनियाँ सडकमा एक युवतीले लक्का जवानलाई कुकुर झैं डोहोर्‍याइरहेको तस्वीरले सानसनी मच्चाएको हो ।
यो सेप्टेम्बर ९ मा फुजिआन प्रान्तको फुजुहाउ शहरको सडकको दृश्य हो ।
एक महिला युवकलाई कुकुरलाई झै दोहोर्‍याइरहेकी छन् । युवकको घाँटीमा कुकुरलाई झैं डोरी लगाइएको छ र उनी चार हात खुट्टा टेकेर युवतीले डोहोर्‍याएतिर पछ्याइरहेका छन् ।
यो दृश्यले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्‍यो र हेर्नहरुका कारण सडक जाम नै भएको थियो ।
पिपुल डेलीका अनुसार युवतीले ती युवकलाई कुकुरलाई झै व्यवहार गरेकी थिइन् । युवकले पनि आफूलाई हेर्न नजिक आएकाहरुलाई आफू मानिस नभई कुकुर भएको बताएका थिए ।
तर, युवतीले ती युवकलाई किन यस्तो व्यवहार गरिन् भन्ने केही खुलेको छैन ।